ICeltra: Ngokuzenzekelayo iNkqubo yokuYila kweNtengiso | Martech Zone
Ngokwe-Forrester Consulting, egameni leCeltra, i-70% yabathengisi ichitha ixesha elininzi ukudala umxholo wentengiso yedijithali ngaphezu kokukhetha. Kodwa abaphenduli baqaphele ukuba imveliso ezenzekelayo yokuyila iya kuba nefuthe elikhulu kule minyaka mihlanu izayo kuyilo loyilo lwentengiso, olunefuthe elikhulu koku:
Umthamo wemikhankaso yentengiso (84%)
Ukuphucula inkqubo / yokusebenza kakuhle (83%)
Ukuphucula ukufaneleka kobuchule (82%)
Ukuphucula umgangatho wobuchule (79%)
Yintoni iPlatform yoLawulo lokuYila?
Iqonga lolawulo loyilo (i-CMP) lidibanisa izixhobo ezahlukeneyo zokubonisa ezisetyenziswa kukuthengisa kunye neengcali zentengiso kwiqonga elinye lokudibana, okusekwe kwilifu. Ezi zixhobo zibandakanya abakhi bokuyila abanakho ukwenza ubuchule obunamandla ngobuninzi, ukupapasha amajelo omnqamlezo, kunye nentengiso yokuqokelela idatha kunye nohlalutyo.
I-G2, amaQonga oLawulo loBuchule
Celtic yi Iqonga loLawulo lokuyila (CMP) ngokwenza, ukusebenzisana, kunye nokukhulisa intengiso yakho yedijithali. Ubuchule, imithombo yeendaba, ukuthengisa, kunye namaqela earhente anendawo enye yokulinganisa amaphulo kunye nokuyila okunamandla kwezixhobo zehlabathi ukuya kwimidiya yasekhaya. Ngenxa yoko, iimveliso zinokulinciphisa ixesha lokuvelisa kwaye zinciphise kakhulu impazamo.
Kuyo yonke ibhodi, sibone ukuthengisa kunye namaqela ayilayo xa kusiziwa kuyilo, ukuvelisa, kunye nokwazisa ngemikhankaso yentengiso kwinqanaba. Abarhwebi kunye namaQela okuSebenza ngokuKhangela bajonge ngenkuthalo isoftware yokuphucula ukusebenza kwenkqubo, ukuhamba komsebenzi, isikali kunye nokufaneleka kwemveliso yabo.
UMihael Mikek, uMseki kunye neGosa eliyiNtloko lesiGqeba laseCeltra
Ngelixa ii-brand zisokola ukugcina iimfuno zokuyila zentengiso yanamhlanje kunye nentengiso, idatha ikwabonakalise inani lezisombululo eziza kuthi zizalise izikhewu kwiinkqubo zazo zangoku kwaye zikhonze iindawo ezishiyiweyo zingafunyanwanga ziindlela ezikhoyo. Xa ucinga ngobuchule obuya kuthi buxhase kakhulu ukudala nokwanda komxholo wentengiso yedijithali, abaphenduli banqwenela:
Iqonga elidibeneyo lokulandela umkhondo wemveliso, ukusebenza, kunye nokusebenza (iipesenti ezingama-42)
Umxholo wokuyila oguqukayo ngokusekwe kwidatha (35%)
Iitrikhi / uvavanyo olwakhelweyo (33%)
Unqakrazo olunye kunikezelo lobuchule kumaqonga kunye namajelo (32%)
Ukuphela kokuphela kokuhamba komsebenzi kwi-multichannel yedijithali yoyilo (30%)
Iimpawu eziphambili zeCeltra zibandakanya:
Yenze Iziphumo zokuyila eziyilwe ngamandla kunye nokuqhutywa kwedatha. Iqonga lisuselwe kwilifu kwimveliso yokwenziwa kwexesha lokwenyani. Abakhi beentengiso abanamandla kunye nabakhi bevidiyo banamava, amava asebenzisanayo. Ukwakhiwa kwetemplate kunye nolawulo kunye noqinisekiso lomgangatho (QA) lwakhiwe ngaphakathi.
Yilawule -Ukufumana ulawulo olupheleleyo kwimveliso yakho yedijithali yokuyila kunye neenkqubo zokusebenza kusetyenziswa indawo esembindini, esekwe kwilifu. Izixhobo zokusebenzisana ngokubonakalayo ngokuseta kunye nokujonga kwangaphambili kufakiwe kwinkqubo yoyilo lwentengiso. Ukuphatheka kwempahla enobuchule iyafumaneka kwiimveliso zonke kunye neefomathi. Ukuhanjiswa kufumaneka kumajelo osasazo nakumaqonga asekuhlaleni anolawulo lwephulo lokuhamba komsebenzi kunye nokuhlanganiswa okupheleleyo kweqonga kwisitaki seetekhnoloji.
Linganisa Idatha edibeneyo yokuyila kuwo onke amajelo okuzisa idatha yokusebenza kumaqela oyilo kunye nokubonelela ngedatha yoyilo kumaqela eendaba. Iqonga linomboniso oqhelekileyo kunye neemetrikhi zevidiyo, umakhi wengxelo kunye nokubonwa kwideshibhodi. Kukwakhona ukuthunyelwa ngaphandle okanye ukunika ingxelo nge-API yokudibanisa iziphumo zomsebenzi.
tags: uyilo lwentengisointengiso yoyiloCelticcmpyintoni i-cmp